🍒Ukuhlawulwa ngokukhawuleza kweCasino-indawo esemthethweni, ubhaliso, iinkqubo zokuhlawula
Ukuhlawula ngokukhawuleza iKasino kwi-intanethi
Ubume bendawo kunye nokusebenza
Imidlalo kunye nababoneleli
Ubhaliso kunye nokuqinisekisa
Iibhonasi kunye nokwenyusa
Enye yeempawu zokuKhawulezisa ukuHlawula iKhasino kukunxibelelana phakathi kwegama kunye nezona zinto zenziwayo."Isiselo esikhawulezayo" - esiguqulelwe ukusuka kwisiNgesi sithetha iintlawulo ezikhawulezileyo. Iqela labadali benkonzo yokungcakaza ekwi-intanethi bothuswa zizikimu esele ziqhelekile kwi-Intanethi ukukhohlisa abadlali kwiikhasino ezikwi-Intanethi. Isisombululo kule ngxaki yayikukuyila ingqondo yayo, engaphuli mthetho zalo naliphi na ilizwe kunye nokuziphatha, okubizwa ngokuba yi-Fast Pay Casino.
Ingxaki yobuqhetseba ayisiyiyo kuphela kolu hlobo lweenkonzo. Oku kubandakanya ukuqinisekiswa kweentsuku ezininzi zokuqinisekiswa kweakhawunti, kunye nokulibaziseka okukhethekileyo kwintlawulo, kunye"nemigibe" kwimithetho kunye neemeko zokusetyenziswa kwekhasino. Ukuhlawulwa ngokukhawuleza kweCasino kuyilelwe ukonwabisa abadlali abathembekileyo ngokuphumelela okuzinzileyo kunye nokubhatalwa okukhawulezayo!
Ikhasino inelayisensi esemthethweni yokudlala iDama N.V. enenombolo yobhaliso engu-152125. Ikwanayo neyayo inkxaso yobugcisa ejikeleza imini nobusuku. Ukuqhagamshelana nenkxaso, ijelo leTelegram, ifom yengxelo, i-imeyile kunye neqhosha lokunxibelelana ngokukhawuleza labasebenzisi ababhalisiweyo banikezelwa.
Ikhasino inomdla ngakumbi nangakumbi kubadlali abatsha kwihlabathi liphela. Isebenze ukusukela nge-2018 kwaye ngeli xesha uzuze igama elihle. I-FPC izenzela igama kwihlabathi liphela ukuphucula uphawu lokungcakaza kwi-Intanethi. Iwebhusayithi yekhasino iyafumaneka ngeelwimi ezili-18, kubandakanya isiJamani, isiRashiya, isiNgesi, isiUkraine, isiKazakh, isiPolish, isiCzech nezinye.
Ungaya kule ndawo ngekhonkco.
Iwebhusayithi esemthethweni ye-Fast Play Casino ayilungelelaniswanga kuphela kwiikhompyuter nakwiilaptops, kodwa nakwizixhobo ezahlukeneyo zeselfowuni- ukusuka kwiitafile ukuya kwii-smartphones. Inkqubo yombala “igudile” kwaye ayihluphi ngamehlo, ithoni ezimnyama ezimnandi zilawula.
Ukuze kube lula, phezulu kukho"i-header" yokufikelela ngokukhawuleza kumacandelo anjenge"Malunga neNkampani","Inkxaso","Iintlawulo","iPromo","iTonamenti" kunye"nokuNgena okanye ukuBhalisa". Ngaphantsi kwayo kukho ibhloko enolwazi olusisiseko malunga neebhonasi ezintsha, iinkqubo zokunyaniseka, unyuselo kunye nemidlalo yeeveki ngeeveki ethe yagqwesa.
Apha ngezantsi kukho ulwazi olusisiseko lomdlalo. Kuyo, unokukhetha ababoneleli abathile, ufumane umdlalo owufunayo, okanye ujonge ikhathalogu eboniswe kwikhasino ekwi-intanethi. Kufuneka kuqatshelwe ukuba ukukhethwa kwababoneleli bemidlalo kungaphezulu kwezinto ezingama-40. Kukho amakhulu emidlalo ngqo kwiwebhusayithi ekuthiwa yi-Fast Pay Casino.
Ezantsi kwesiza ngabaphumeleleyo kwimidlalo, kunye nabaphumeleleyo kuyo yonke indawo yekhasino. Ukongeza, le nxalenye yewebhusayithi iqulethe iitumente zeveki nganye onokuzifaka phantsi kwemiqathango ethile
Kwaye ekugqibeleni yifom yobhaliso, ebandakanya izinto ezisemgangathweni:
Ukukhethwa kwemali (i-USD, i-EUR, i-NOK, i-CAD, i-AUD, i-NZD, i-PLN, i-ZAR, i-JPY, i-BTC, i-ETH, i-BCH, i-LTC, i-DOG, i-USDT);
Ukufundwa okunyanzelekileyo kweMigaqo neMiqathango, uMgaqo-nkqubo wabucala.
Ilayibrari yokuHlawula ngokuKhawulezayo yeKhasino iqulethe inani elikhulu lababoneleli kunye nezibonelelo zabo zemidlalo: Amatic, BTG, BGaming, Booming, EGT, ELK, EvoPlay, Belatra, Blueprint, Endorphina, Fantasma, Fugaso, Old skool, All41 Studios, Playson , URabcat kunye nabanye ababoneleli.
Isabelo sengonyama kwimidlalo ebonisiweyo ngoomatshini ekufakwa. Akukho midlalo iphelelwe lixesha ekhasino. Ikhathalogu ihlaziywa rhoqo kwaye ihlaziywa. Bonke abathengisi be-casino eku-intanethi banikezela ngeenkonzo ze-3D zale mihla, imijikelo engekho semgangathweni, izandiso kunye nezinye izibonelelo.
Ukukhawuleza ukubhatala iKhasino kunika ingqalelo kungekuphela koomatshini bokufaka, kodwa kukongeza umgca wayo ngeendlela ezahlukeneyo zokungcakaza. Umzekelo, kukho iindidi ezinazo zonke iintlobo zeeroulette, i-blackjack kunye ne-baccarat. Uhlobo nemida yemidlalo iyahluka ngokuxhomekeka kwiitafile.
Ukuvula iakhawunti kwiKhasino yokuHlawula ngokukhawuleza kulula kakhulu. Ukwenza oku, kufuneka ucofe kwiqhosha lokubhalisa kwi"header" yesiza okanye uye ezantsi kwifom yobhaliso.
Qala ukubhalisa kwi-FastPay Casino
Ubhaliso lulula kwaye lubandakanya izinto ezisemgangathweni kwi-Intanethi: i-imeyile, ipassword, eyona mali isetyenzisiweyo kunye nenombolo yefowuni. Kubalulekile ukuba uyaziqhelanisa nemigaqo nemiqathango, umgaqo-nkqubo wabucala kwaye ujonge ibhokisi efanelekileyo phambi kokucofa kwindawo ethi"irejista" kule fomu.
Ikhonkco liya kuthunyelwa kwidilesi ye-imeyile echaziweyo ukuze wenze iakhawunti yakho yomdlalo. Kuya kufuneka ulandele ikhonkco kwileta kwaye ungene kwiwebhusayithi yekhasino. Kuyacetyiswa kwangoko ukuba ugcwalise idatha yakho yobuqu kwicandelo"ledatha yeprofayile". Kufuneka ubonise igama nefani yokugqibela, umhla wokuzalwa, isini, ilizwe, isixeko, idilesi kunye nekhowudi yeposi. Kubalulekile ukuba idatha eyinyani kufuneka igcwaliswe ukuthintela ukungqubana kunye neemeko ezingathandekiyo. Ulawulo lwenkonzo lunokujonga idatha yakho ukuba ichanekile nanini na.
Kwixesha elizayo, kuya kufuneka uhambe ngenkqubo yokuqinisekisa. Yenziwa kumntu ngamnye. Umzekelo, umdlali ukrokrelwa umdlalo ongcolileyo okanye ugcino-mali oluninzi, isimbo sokungcakaza okanye idilesi ye-IP ihlala itshintsha. Inkqubo yokuqinisekisa iqulethe ukufaka iifoto ezikumgangatho ophezulu: ipaspoti yesizwe okanye ikhadi lesazisi, iphepha lokugqibela lokusetyenziswa kobhaliso kunye nesithombe-skrini okanye ifoto yekhadi lenkqubo yentlawulo.
Ukukhawulezisa ukuhlawula iKhasino ukwenza imigaqo-nkqubo ethembekileyo ngokubhekisele kubadlali bayo, ngakumbi nakwabafikayo. Ikhasino ihlala iqhuba iinkqubo zebhonasi zedipozithi yokuqala yeakhawunti yokudlala.
Ibhonasi yokuqala yedipozithi eyi-100% (ukuya kuthi ga kwi-100 euros okanye iidola + i-100 free spin). Oku kukhuthazwa kwabadlali abatsha abanethuba lokunyusa ibhanki yabo yokuqala. Kukho imigaqo embalwa:
Idiphozithi yokuqala evela kwi-20 USD/EUR, 0.002 BTC, 0.05 ETH, 0.096 BCH, 0.4 LTC, 8800 DOGE;
yenza idipozithi yakho yokuqala ngaphandle kokusebenzisa ikhowudi yebhonasi;
ukubheja yi-50x yemali yebhonasi;
akukho mda kwimali yokuphumelela ibhonasi yemali;
I-100 spins yasimahla ikhutshelwa i-20 nganye kwiintsuku ezi-5.
Ikhasino ikwabonelela ngenkqubo ye-VIP yomdlali ngamnye onomdla, imigaqo-nkqubo yayo inokufumaneka kwiwebhusayithi kwicandelo"lePromo".
Ukuhlawula ngokukhawuleza iKasino kuvulelekile kwiinkqubo ezininzi zokuhlawula, iimali zemali kunye nee-cryptocurrensets. Ke, unokugcwalisa ibhalansi yakho yomdlalo usebenzisa:
Visa, Mastercard kunye neMaestro;
izipaji zombane iWebMoney Ecopayz, iNeteller, iSkrill, iMuchbetter, iMifinity, ukuhanjiswa okukhawulezileyo, i-EcoVoucher, iNeosurf;
i-cryptocurrensets: i-Bitcoin, i-Bitcoin imali, i-Ethereum, i-Litecoin, i-DOGEcoin, i-Tether.
Ukukhutshwa kwemali kuyafumaneka kwi-13 yeenkonzo ezinikezwe apha ngasentla. Imida yediphozithi isukela kwi-10 ukuya kwi-4000 ye-euro okanye iidola, i-cryptocurrency - akukho mda kwixabiso eliphezulu. Ukurhoxiswa kwemali kuyafumaneka kwi-20 yeedola/i-euro, ukusuka kwi-0.01 bitcoin, i-litecoin okanye i-ether, i-dogecoin iyafumaneka kwiwaka kunye ne-tether-ukusuka kwi-20.
Ixesha elibekiweyo lokurhoxa phantse kuzo zonke iinkonzo lisusela kumzuzu ukuya kwiiyure ezimbini - le yeyona nto ikhawulezayo kwaye iqinisekisiwe yokurhoxa kweemali eziphumeleleyo phakathi kweenkonzo ezifanayo zekhasino ezikwi-intanethi.